Habka mugdiga ah ee IOS 13 ayaa hadda la jaan qaadaya Microsoft Outlook | Wararka IPhone
Habka mugdiga ah ee IOS 13 ayaa hadda la jaan qaadaya Microsoft Outlook
Mid ka mid ah sheekooyinka ugu waaweyn ee aan ka helno bilowga iOS 13 waa habka mugdiga ah, mid ka mid ah qaababka inta badan waxaa filaa isticmaalayaal badan iyo in ugu dambeyntii waa xaqiiqo leh nooca ugu dambeeyay ee macruufka. Tan iyo markii la bilaabay iPhone X, iPhone-kii ugu horreeyay ee leh shaashadda OLED, waxaa jiray codsiyo badan oo bixiya xaaladdan mugdiga ah.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku dejin karnay qaabkan gacanta iyada oo loo marayo goobaha codsiyada. Iyadoo macruufka 13, waxaan u qalabayn karnaa qalabkeena sidaas habka mugdiga ah ayaa loo hawlgeliyaa iyadoo la eegayo waqtiga maalinta aan ku jirno. Sidan oo kale, codsiyada ayaa si otomaatig ah u kicin kara ama u shaqeyn kara iyada oo loo eegayo waxa lagu qaabeeyey nidaamka.
Maamulaha boostada ee Microsoft, Outlook ayaa hadda la cusbooneysiiyay si loogu daro hab mugdi ah, hab mugdi ah kaas toos u shidaa oo u demiyaa haddii aan ku shaqeyno qalabkan aaladdayada. Dhammaan kuwa aan ku dhaqaajineynin habka mugdiga ah nidaamka, waxaan sidoo kale ku dhaqaajin karnaa qaabkan gacanta iyadoo la adeegsanayo dookhyada dalabka.
Habka mugdiga ahi waa cusub iyo kaliya cusub ee aan ka helno cusbooneysiintan, haddii aynaan tixgelin siin ciladaha caadiga ah iyo hagaajinta xasilloonida ee dalabka.
Haddii aan ka hadalno codsiyada emaylka, in kasta oo xaqiiqda ah in Spark ay ku guuleysatay inay noqoto ikhtiyaar aad u fiican in la tixgeliyo, hawlgalka guud ahaan bilihii ugu dambeeyay ee codsigan waxay bilaabaysaa inay ka tagto wax badan oo la doonayo.
Inkasta oo la bilaabay Spark, Muuqaalka ayaa lumiyay tirooyin isku dhafan, laakiin nasiib wanaag ragga Microsoft waxay yaqaanaan sida loo dhagaysto adeegsadayaashooda waxayna si joogto ah u sii daayaan cusbooneysiin cusub iyagoo ku daraya shaqooyin cusub iyo hagaajinta kuwa jira.
Microsoft Outlook ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash oo uma baahna wax rukhsad ah Xafiiska 365.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Habka mugdiga ah ee IOS 13 ayaa hadda la jaan qaadaya Microsoft Outlook
Markay ku jirto xaalad mugdi ah kumbuyuutarka bar cad ayaa ka muuqda badhanka 123 iyo ABC-ga ayaa lagu dhajiyay baarkan.
In muddo ah ayay ahayd markii xaalad mugdi ah loo heli jiray Muuqaalka
Ujawaab Luis Daniel